အပေါ်ဖြူး – Topping | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » အပေါ်ဖြူး – Topping
Posted by ဇီဇီ on Oct 22, 2015 in Food, Drink & Recipes | 28 comments
KZ's Diary KZ's Food
တဂျီးရဲ့ ရွှေပြည်ကြီးအစားအသောက်တွေရဲ့ အပေါ်ဖြူးတွေကို လိုချင်ပါတယ်လို့ တောင်းဆိုအပြီးမှာ…
ချက်လိုက်၊စားလိုက်နဲ့ကြိုးပမ်းလိုက်တာ ကိုယ်အလေးချိန် တိုးလာပါကြောင်းးး
ဂွိဂွိ။ ကွကိုယ်ကျ သိပ်မစားရှာဘူးဆိုတော့။
သုပ်နည်းကတော့ ဒီမှာရေးထားတယ်။ http://myanmargazette.net/199829
မန်းလေးအခေါ် မုန့်တီသုပ် (သို့) ရန်ကုန်အခေါ် နန်းကြီးသုပ် ကိုပြောတာနော်။ ရန်ကုန်က မုန့်တီလို့ပြောရင် ရခိုင်မုန့်ဖတ်သုပ်တို့ ရခိုင်မုန့်တီတို့နဲ့မှားတတ်လို့။
မန်းလေးမှာတော့ မုန့်တီသုပ် က နန်းလတ် ကို သုပ်တာဖြစ်ပြီး နန်းကြီးကမုန့်ဖတ် အကြီးပါ။ မုန့်ဖတ်သုပ်ဆိုတာက မုန့်ဟင်းခါးဖတ်ကို သုပ်ထားတာမို့ နည်းတူပြီး မုန့်ဖတ်ကွဲပါတယ်။
မုန့်တီရဲ့ Topping တွေ က ဒေသ နဲ့ အကြိုက်ကို မူတည်ပြီး ကွဲပြားပါတယ်။
ကျနော် ကတော့ သာမာန်အားဖြင့်……
၁) မတ်ပဲဗယာကြော် (သို့) ပဲကပ်ကြော်
၂) ပဲသီးတောင့်ပါးပါးလှီး (သို့) ဂေါ်ဖီထုတ်ပါးပါးလှီး
၄) နံနံပင်၊ ကြက်သွန်မိတ် ရိပ်ရိပ်လှီး
၅) ကြက်သား (သို့) ကြက်မြစ်ကြက်သဲ (သို့) အမဲအကြော (သို့) ငါးဖယ် စသည်တို့ကို အနှစ်များများနဲ့ ဆီပြန်ချက်
၆) ကြက်သွန်ဖြူ ဆီချက် (သို့) အနီဆီချက်
၇) ကြက်ဥပြုတ် ဝိုင်းဝိုင်းလှီး
မုန့်ဟင်းခါး (သို့) မုန့်ဟင်းငါး
ဒါကတော့ ဘာကိုခေါ်မှန်း ရှင်းပါတယ်။ ဒါတောင် မုန့်ဟင်းခါး စားတယ် နဲ့ မုန့်ဟင်းခါး သောက်တယ်မှာ ကွဲကြသေးတယ်။
ချက်နည်းတွေက ဒီ မှာရှိပါတယ်။ http://myanmargazette.net/205350
ကျနော် ထည့်နေကြ မုန့်ဟင်းခါးရဲ့ Topping တွေကတော့….
၁) မတ်ပဲကြော် (သို့) ဘူးသီးကြော် (သို့) ပဲကပ်ကြော်
၆) ပဲသီးစိမ်း ပါးပါးလှီး
၈) အိုးဘဲဥ (သို့) ကြက်ဥပါးပါးလှီး
တစ်ချို့က (ဖေ့ဘုတ်မှာ လိုက်ပြီး အင်တာဗျူးထားတာ)
၁) ကြက်သွန်ကြော် (သို့) မန်းလေးပဲကြော်
၂) ကြက်အဖီကြော်၊ ပုဇွန်ကြော်
၄) ပုဇွန်ဆီ (သို့) ပုဇွန်ဥ
၈) ပုဇွန်ချဉ် (သို့) ငါးချဉ်
၁၀) နံပြား (သို့) စာကလေးခွေ
ချက်နည်းက ဒီမှာကြည့်။ http://myanmargazette.net/218539
မွသဲဆီက ယူသည့် အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ
မ နန်းကေသီ ဆီက အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ
မစင်ဒီ ဆီက ယူသည်
ကျနော့ အကြိုက် ပုံမှန် Topping ကတော့…..
၅) ပဲပြား (အစိမ်း/ကြော်)
၆) ရှောက်သီး (သို့) သံပုရာသီး
၇) ဘဲဥ ပါးပါးလှီး
၃) ပဲပင်ပေါက်ပြုတ် ထည့်တတ်ကြတယ်။
မွမွနို ရဲ့ သများ ပို့(စ) အမှီ ထချက်တဲ့ အုန်းနို့ ခေါက်ဆွဲ နဲ့ တော့ပင်းတွေ။
လုပ်နည်းတွေကတော့ ဒီမှာကြည့်ပါ ခညာ။ http://myanmargazette.net/212175
မ နန်းကေသီ ဆီက မြီးရှည်
ပုံမှန် ထည့်စရာ Topping တွေကတော့……
၁) ဝက်ကလီစာ (သို့) ဝက်သား (သို့) ကြက်သား (သို့) ကြက်မြစ်ကြက်သည်း (ပြုတ်/ချက်)
၅) ဝက်ခေါက်ကြော် (သို့) ဝက်ဆီဖတ်
၁၁) ကြာညို့ (ပဲငံ အနောက်)
၁၂) ဆီချက် (သို့) ဆီမွှေး
၄) မြေပဲဆံလေးစိတ်ကွဲ ထည့်သတဲ့။
ရခိုင် မုန့်တီ (ခေါ်) အာပူလျှာပူ
ချက်နည်းကိုမသိဘူးး .. ဟိ။ ရယ်ဒီမိတ်ကိုချက်တာရယ်။ ဟိ။
ထည့်စားဖြစ်တဲ့ Topping တွေက…..
၄) ငါးနဲ့ ငပိအနှစ်
၆) မန်ကျည်းရည် (သို့) မရမ်းသီးခြောက် အရည်
တစ်ချို့ ကတော့ ဒါတွေပါ ထည့်စားတတ်သတဲ့။
ဒါလည်း တစ်ခါလား စမ်းချက်ဖူးတယ်။ စားနည်းပဲ သိတယ်။ ဟိ။
မနန်းကေသီ ဆီက ယူသည်
Topping က သိပ် မကွဲပြားဘူးး ဒီလောက်ပဲ။
၇) ပဲငံပြာရည် အနောက်
၈) နှမ်း/ရှောက်ကော/ပါကော ဆီ
၁၀) ဂေါ်ဖီချဉ် (သို့) မုန်ညင်းချဉ် (သို့) မုန်လာချဉ်
ကြာဇံချက်ကိုတော့ ချက်ကတည်းက အတော်များများထည့်ချက်တာမို့ အရမ်းများများမရှိဘူးလို့ပဲပြောရမယ်။
ပုံမှန် Topping ကတော့…
တစ်ချို့ (အဲ အနီးကပ်ဆုံး ကျနော့ မွေးမေလေ့)
၂) ရှောက်သီးအမွှာ ထည့်စားဖြစ်တယ်။
ကြိုက်တဲ့ ခေါက်ဆွဲ အမျိုးအစားကို ကြိုက်တာတွေ ထည့်သုပ်လို့ ရသောကြောင့် မကြာခန လုပ်စားဖြစ်သောအစားအသောက် ဖြစ်ပါသည်။
သုပ်နည်းက ပို့(စ) တင်ဖူးတာ ဒီမှာ http://myanmargazette.net/161517
Topping က မုန့်တီနဲ့ Generally တူတူပဲ။
အချဉ်က မန်ကျည်းရည်နဲ့ ပိုကောင်းတယ်။
ခေါက်ဆွဲသုပ်ကတော့ အချဉ်ရည်က အဓိကပဲထင့်…။ မွေ့သုပ်ကျွေးသမျှ..အိမ်ကခေါက်ဆွဲသုပ် လှည့်ကိုမကြည့်သလောက် အပြင်မှာ သူမသိအောင် ဆိုင်တကာလှည့်ပတ်စားနေတာ..
ကြာဇံဟင်းခါးကို မြင်တော့ ၁၁၅မိုင်ကို သတိရတယ်…။ နေပြည်တော်-ရန်ကုန် ခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန်သွားခဲ့တုန်းက မြန်မြန်ရပြီး စားကောင်းတဲ့ ဒါပဲ စားဖြစ်နေတော့…
ရှမ်းခေါက်ဆွဲကတော့ အကြိုက်ဆုံးအစားအစာ….။ အဲ့ဒါရတဲ့ ဆိုင်တကာ လိုက်မြည်းတယ်…။ ကံကောင်းထောက်မစွာပဲ..ကိုယ့်ရုံးရှေ့က ဆိုင်မှာ တစ်ပွဲ ၅၀၀ နဲ့ အတော်ကောင်းကောင်းအရသာရှိနေတော့ ဘာပြောကောင်းမလဲ….ရုံးခန်းတွေလိုက်လိုက်ပို့တဲ့ ဆိုင်က ကောင်မလေးဆို အမ အခန်းကတော့ မျက်စိမှိတ်တောင်လာလို့ရနေပြီဆိုကိုးး
ဒါတွေ ရတော့..ကိုယ့်ကို အိမ်မှာ လက်တည့်စမ်းလို့ရပြီ…
ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲလေးလဲ နည်းလေးရှိရင် သိချင်ပါတယ် မချွိရေ… အဆင်ပြေရင် ပြောပါဦးနော်…။ အုန်းနို့မဟုတ်ဘဲ တခြားအစားထိုးတစ်ခုခုသုံးလို့ရလားဟင်…. နို့စိမ်းလိုမျိုးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့..
ဒီထဲမှာ ရှိတယ် ကင်းကောင်လေးးး
(အုန်းနို့/နို့စိမ်း/မြိတ်/ထားဝယ်/ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲ – KZ’s ထမင်းဆိုင်)
ခက်တာက သူက သုပ်ရတာ ဆိုတော့ နန်းကြီးတွေ ဟင်းအသားတွေ က အေး နေတာ။
စားရတော့ အေးစက်စက်ကြီး ဆို တယ် သဘောမတွေ့။
နာဆို မုန့်ဖတ်ကို ရေနွေးဖျော
ဟင်းကလည်း မီးဖိုပေါ်က ဟင်း နဲ့ သုပ်စားပြီး
မြီးရှည်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာ တရုတ်စကားလုံး မီရှန့်ကနေ ဆင်းသက်လာသတဲ့။ မီဆိုတာ ဆန်။ ရှန့်ဆိုတာ ကြိုး/နန်း။ မီရှန့်ဆိုတာ ဆန်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ နန်းလုံးပေါ့။ မန္တလေးမှာတော့ မြီးရှည်လို့ဆိုလိုက်ရင် သစ်သားအထမ်းခုံလေးထဲက သွပ်ပြားကာထားတဲ့မီးဖိုရယ်၊ မီးဖိုပေါ်က အသားတွေအရိုးပြုတ်တွေထည့်ထားတဲ့ ဟင်းရည်အိုးရယ်၊ အဆာပလာခွက်တွေ အစုံပလုံနဲ့ မြီးရှည်ခုံ သစ်သားဆိုင်းထမ်းလေးကို ပြေးမြင်ကြမယ်။ ခွေးခြေခုံပုပုလေးတွေနဲ့ ၀ိုင်းဖွဲ့ထိုင်နေကြပုံတွေကို ပြေးမြင်ကြမယ်ပေါ့။ နံနက်စောစောစီးစီး သစ်ရိပ်ဝါးရိပ် မိုးကာအရိပ်အောက်က လူစုစုနဲ့ ကြိတ်ကြိတ်တိုးနေတတ်တဲ့ မြီးရှည်ဆိုင်လေးတွေက မန္တလေးနံနက်ခင်းရဲ့ မရိုးနိုင်တဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုပါပဲ။
မုန်ညင်းချဉ်၊မုန်လာချဉ်၊ ဟင်းရည်တို့နဲ့ တွဲစားတတ်ကြတယ်။
ရန်ကုန်မှာ ဘယ်လိုမှ ရှာမရလို့ ငတ်နေတယ် :'(
နန်းကြီးသုပ်ကတော့ မုန့်သားပိုထူတဲ့အတွက် တစ်လုပ်စားလိုက်တိုင်းမှာ အရသာပိုဆိမ့်သလိုရှိပါတယ်။
မန္တလေးမှာ မုန့်တီဟာ နံနက်စာအဓိကရောင်းတာမို့ မုန့်တီစားချင်ရင် နေမမြင့်ခင်သွားစားဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။
တော့ပင်တွေနဲ့.. မြန်မာအချောင်းစာတွေ.. ကမ္ဘာပါတ်လို့ရတယ်…။
အရောင်စပ်လှဖို့ရယ်.။ .. အပျော့..အမာ… အချောင်း.. လေးထောင့်.. အ၀ိုင်း.. အလုံး.. အစေ့..အဖတ်.. အကြွတ်.. အရွ… စသဖြင့်.. ပါးစပ်ထဲ.. ခံစားမှုတခုပေးဖို့ရယ်ရည်ရွယ်ပြီး.. အသစ်တိုးသင့်မလားပဲ..။
အရောင်ရယ်.. သဏ္ဍန်ရယ်.. အစားအစာရဲ့မျက်နှာပြင်အကြမ်းအရှရယ်က.. အရသာအပေါ်လွှမ်းမိုးရှိရှိပါတယ်…။
flavor – Can texture affect taste? – Seasoned Advice
Oct 17, 2012 – I was about to write toafriend: “…but texture affects taste”, when I … Yes, there are two different meanings of taste, as you already mentioned.
ရှိတဲ့ တော့ပင်းတွေနဲ့ မလုံလောက်သေးဘူးလားးး
စု၊တု၊ပြုမှာ.. ဇီမမအဆင့်က… ပြုရတော့မယ်လေ…။
အဲဒါနဲ့.. အသစ်ပြုပါလားလို့.. တိုက်တွန်းတာပါ…။
မုန့်ဟင်းခါးထဲ.. ချိစ်အတုံးတော့ပင်လေးတွေထည့်ပြီး.. စင်္ကာပူလို့နာမယ်ပေးပေါ့…။
80+ Creative Soup Toppings
Toppings that contrast with the flavor and texture of the soup are going to work best. Heavy cream soups pair well with fresh toppings (like chopped green onions) and briny or sour toppings (like chopped olives orasqueeze of fresh lemon). Many brothy soups pair well with crunchy toppings (like tortilla chips or croutons).
Thanksgiving leftover recipes turkey chili
Chili is inaleague of its own when it comes to delicious toppings. There are so many of them. A simple bowl of chili can turn into something unbelievable when you add toppings like:
Cornbread, broken into pieces
Chopped scallions/green onion
80 soup topping ideas, from Cheap Recipe Blog
Fresh Soup Toppings
Sprinkle some fresh vegetables, herbs, and even fruit on top of your soup to liven it up:
Pomegranate seeds (great on butternut squash soup)
Butternut squash soup with pomegranate seeds asatopping, from Cheap Recipe Blog
Sliced pears or sliced apples (also great on squash soup)
ပဲခူးသူ မယ်မြန်မာစင်္ကြ၀ဌာငှက်ကဌက.. ဖဘမှာ…အဲလိုရေးထားတယ်..။
တို့ ပဲခူးကလူတွေက မုန့်ဟင်းခါးစားရင် ဘယာကြော်နဲ့ ခရမ်းချဉ်သီး ပဲသီး နံနံပင် ထည့်ပြီး ဟင်းရည်နည်းနည်းနဲ့ စားတာ
အဲဒါ တောင်ငူကလည်း အဲဒီလိုစားတယ် တဂျီး
တောင်ငူမုန့်ဟင်းခါး အသုပ် နဲ့ ရေဖျော်ပါ
ငါးခူ ( သို့) ငါးကျီး ကို စပလင် နနွင်း ငံပြာရည် ဆား ထဲ့ ပြုတ်ပါတယ်
ငါးကို အသားနွင် , အရိုးကို ထောင်းရေဖျော် ဇကာနဲ့စစ်ထားပါတယ် ( အရည်မည်းတဲ့ အကြောင်းအရင်းပါ)
ကြက်သွန်ဖြူနီ ဘတ်လတ်ထောင်း ဂျင်းအနည်းငယ် နဲ့ ဆီပါလေကာနဲ့ ဆီသတ်ပါ ( ထောင်းထားတဲ့ ပြုတ်ရေထဲ့) ရေလိုသလောက်ထဲ့ ပြုတ်ရေကျအောင်တည်ပါတယ် … ကြက်သွန်နီ ဥသေးခွာပြီးထဲ့ပါတယ်
ဆန်လှော် ထောင်း ဟင်းရည် အရမ်းပွက်ရင် အနည်းငယ်ထဲ့ပါတယ်
အရသာမြည်း ပြီးလိုတဲ့ အရသာထဲ့ ဟင်းရည်အိုးရပါပြီ ..
ကောက်ညှင်းဆန်လှော်မှုန့် ( တောင်ငူက မှာပါတယ်)
ပဲကပ်ကြော် ( တောင်ငူက မှာပါတယ်)
မုန့်ဖတ်ထဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးပါးပါးလှီး ပဲသီး နံနံပင် ကောက်ညှင်းဆန်လှော်မှုန့် ငြုပ်သီးမှုန့် ပဲကြော် ချေထဲ့ ဟင်းရည်ကြည် အနယ်ငယ်ထဲ့ အရသာထဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ ဆီကျက်ထဲ့ စေးစေးလေး သုပ်ပါတယ်
မုန့်ဖတ်ထဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးပါးပါးလှီး ပဲသီးနံနံပင် ကောက်ညှင်းဆန်လှော်မှုန့် ငြုပ်သီးမှုန့် ပဲကြော်ချေထဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ ဆီကိက်ထဲ့ အရသာထဲ့ ဟင်းရည် ထဲ့ပါ တယ်
??တောင်ငူမုန့်ဖတ်က အနည်းငယ် အလုံးတုတ်ပါတယ်
(ချက်နည်းကွဲပြားမှု့များရှိနိုင်ပါသည် တတ်သလောက်မှတ်သလောက်နဲ့ အိမ်က ပြောပြသလောက်ဖြင့် ချက်ပါတယ် )
မွင်းငါးကို ပဲပင်ပေါက်တွေ ထည့်စားတတ်တဲ့ ကရင်ပြည်နယ်ကို သတိရသွားတဲ့အပြင်
မွင်းငါးဟာ ပဲမှုန့်တွေ များနေတဲ့ ပျစ်ချွဲချွဲ ပြည်မွင်းငါးကိုလည်း သတိရသွားမိ။
သဂျား ဝယ်ကျွေးဧည့်ခံဖူးတဲ့ မန်းလေး မုန့်တီ(နန်းကြီးသုပ်)ကိုလည်း သတိရသွားတယ်။
ဟိုတနေ့ကပဲ.. ဖွေးဖွေးကို.. ဓာတ်ပုံရိုက်လာသေး…။
ရုပ်ရှင်ပွဲတော်အတွက်.. ယူအက်စ် ရောက်နေကြလေရဲ့..။
ငတ်နေပါတယ်ဆို စားစရာစရာတွေအကြောင်းပဲ တင်တင်နေတယ်… ဂယ်ပဲ….
တညား တခြားအကြောင်းတွေ တင်တုန်းက မောင်ကာကြီးက ဘယ်ရောက်နေတာတုန်း
ထိပ်ဆုံး တဇွန်း စားကြည့် မုန့်ဟင်းခါး တကယ်ကြိုက်တဲ့လူဆို သိပါတယ်….
ကျုပ်ဟိုမှာနေတုန်း မျက်ရည်ပါကျဖူးတယ်.. မုန့်ဟင်းခါးနံ့ရလို့…
ကျုပ်တို့ စမ်းချောင်းမယ် မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်ကောင်းကောင်းတွေ တပုံကြီး ရှိသယ်….
သူတို့လင်မယားအဆင်မပြေတာ ကိုယ်တွေမှာ စိတ်တွေ မကောင်းဖြစ်လို့ ….
အဲ့သလောက် စိုးမိုးတာဗျ… မုန့်ဟင်းခါးများ ..အချာပင်မှတ်လို့….
အဆာပြေစားတတ်တဲ့ ဘရိတ်ဘတ်စ် တခုထက်ပိုသဗျ…
နိ ပြောတော့ နာ့ ကို စမ်းချောင်း မွင်းငါး ကျွေးမယ် ဆိုပြီးးး
.နန်းကြီး၊ နန်းပြား သုတ်ကြိုက်မှကြိုက်
ခုက အပေါ်က ဖြူးတဲ့ အဆာပလာတွေကို ပြောချင်တာ မိုက်မိုက်။
ယူအက်စ်မှာ.. ပစ္စည်းအမယ်အစုံရှိတော့.. လက်တည့်စမ်းကြမှာမြင်ယောင်သေး…။
ရှမ်းမြောက် မုန်းခိုမှာ ကိုးကန့်တွေစားတဲ့ ချေးဆီ ထမင်းကြော်အကြောင်း ရေးပေးမယ်အေ …. အဆင်တဲ့ရင် ကမ္ဘာကျော်မဲ့ အစားအစာ
ကြားရတာ မသက်သာထာ အေ